सन्दीप खेल्छन् कि हेर्छन् मात्र?
सराेज तामाङ मंगलबार, असोज १३, २०७७, १६:४८
काठमाडौं- इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) टी ट्वान्टी क्रिकेटमा दिल्ली क्याम्पिटल्सले लगातार दुई खेलमा जित निकाल्यो। तर नेपाली दर्शकले हेर्न चाहिरहेका सन्दीप लामिछाने दुबै खेलमा बेन्चमा रहे। मैदानमा खेल देखाउन आतुर देखिएका सन्दीप मैदान उत्रने पर्खाइमा नै छन्। जुन थप कठिन देखिँदैछ।
मंगलबार राति दिल्लीले आफ्नो तेस्रो खेलमा डेविड वार्नरको कप्तानीमा रहेको सनराइजर्स हैदराबादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। जसमा सन्दीप पुनः बेन्चमा नै रहने अनुमान क्रिकेट विश्लेषकहरुको देखिन्छ। एक खेलमा चार विदेशी खेलाडीको कोटामा सन्दीपको नाम अटाउन गाह्रो परिरहेको छ।
क्यारेवियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) मा जमैका तलावाजबाट सबै खेल खेलेका सन्दीप आइपिएलमा पनि सुरुवाती खेलमा टिममा पर्ने विश्लेषण थियो। तर सबैको तर्क दुई खेलसम्म गलत सावित भयो। हुन त सिपिएल र आइपिएल दुई फ्रेन्चाइज लिगमा धेरै फरक छ। विदेशी स्पिनरलाई आइपिएलमा पर्नु चुनौती नै देखिन्छ।
अब दिल्लीको तेस्रो खेलमा सन्दीप खेल्छन् कि हेर्छन्? यो सिजनको आइपिएल सन्दीपको लागि निकै अर्थ राख्छ। सन्दीपको यात्रा यो सिजन बैन्चमै सीमित भए उनको आइपिएल भविष्य धरापमा पर्न सक्छ। सन्दीप स्वयमले पनि भनेका छन्, ‘यो सिजनको आइपिएल निर्णायक हुनेछ।’
सन्दीप प्लेइङ इलाभेनमा नपर्दा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहे पनि यसभित्र दुई वटा कारण मात्रै मुख्य छन्। एउटा प्लेइङ सेटबाटै खेल्दै गरेका विदेशी खेलाडीको उच्च प्रदर्शन हुनु अर्को स्पिनर अश्विन, अमित र अक्षर लयमा हुनु।
सन्दीप प्लेइङ इलाभेनमा नपर्नु दिल्लीको स्पिनरलाई मात्रै तुलना गरेर हेरियो भने त्यो अपूर्ण हुनेछ। अहिले दिल्लीको सेटबाट अस्ट्रेलियाका मार्कस स्टोइनिस, वेष्ट इन्डिजका सिमरन हिटम्यर तथा दक्षिण अफ्रिकाका कागिसो रबडा र एनरिच नोर्टजेले खेलिरहेका छन्।
यी चार विदेशी खेलाडीले पहिलो खेलमा किंग्स इलाभेन पञ्जाब र दोस्रो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध खेले। पञ्जाबविरुद्ध जितको मुख्य श्रेय स्टोइनिस र रबडालाई जान्छ। स्टोइनिसले २१ बलमा सर्वाधिक ५३ रन बनाएका थिए। ४ ओभरमा २८ रन खर्चिएर २ विकेट लिएका रबडाकै उत्कृष्ट बलिङमा दिल्लीले पञ्जाबलाई सुपर ओभरमा हराएको थियो। हिटम्यरले भने १३ बलमा ७ रन मात्रै बनाए भने नोर्टजेले ४ ओभरमा विना विकेट ३३ रन खर्चिए। स्वभाविक रुपमा पहिलो खेलमा हिटम्यर र नोर्टजे चल्न सकेनन्। दुबै खेलाडी कमजोर नै देखिए।
सिपिएलबाट आइपिएल खेल्न युएई पुगेका सन्दीप पहिलो खेलमा नपर्नुको कारण उनको क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने अवधि शनिबार मात्रै सकिनुलाई पनि मानिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नै भएको खेलमा सन्दीप प्लेइङ इलाभेनमा नपर्नु एक हिसाबले ठीकै हो। यो अर्थमा कि दिल्ली टिमका अन्य खेलाडी करिब महिना दिनबाट अभ्यास गरिरहेका थिए।
त्यसकारण दोस्रो खेलमा चेन्नाईविरुद्ध सन्दीप टिममा पर्ने अनुमान थियो। तर यो खेलमा पनि सन्दीप बेन्चमै रहे। चेन्नाईविरुद्ध स्टोइनिसले ३ बल मात्रै खेल्न पाए भने हिटम्यरको ब्याटिङ पालो नै आएन। बलिङतर्फ रबडाको लय उस्तै रह्यो। ४ ओभरमा २६ रन ३ विकेट लिए। नोर्टजेले पनि ४ ओभरमा २१ रन खर्चिएर २ विकेट लिए।
पहिलो खेलमा घाइते भएका अश्विन पूर्णरुपमा ठिक नहुँदा उनको स्थान अमित मिश्राले लिए। अमितले पनि चेन्नाईविरुद्ध विकेट नलिए पनि राम्रो खेले। त्यसैले सनराइजर्स हैदराबादविरुद्ध पनि दिल्लीले पुरानै सेट मैदानमा उतार्ने अनुमान छ।
सन्दीपलाई खेलाउन अहिले प्लेइङ सेटमा रहेकामध्ये एक विदेशी खेलाडीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जब कि चारै विदेशी खेलाडीले सन्तुष्ट हुन सक्ने प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
सन्दीप प्लेइङ सेटमा नपर्नुको कारण दिल्ली टिममा भेट्रान स्पिनर हुनु नै मुख्य कारण भएको बताउँछन् नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान तथा सन्दीपका प्रशिक्षक समेत रहेका राजु खड्का। उनी भन्छन्, ‘दिल्ली टिममा सन्दीपभन्दा राम्रा अश्विन र मिश्रा स्पिनर छन्। उनीहरु सन्दीपको तुलनामा धेरै अनुभवि पनि छन्।’
सन्दीपले आफू टिममा पर्न नेट अभ्यासमा उनीहरुभन्दा अब्बल सावित गर्नै पर्छ। अहिले दिल्ली टिमले खेल जितिरहनु पनि टिममा फेरबदल नहुनु र सन्दीप पर्न नसक्नुको कारण मान्न सकिन्छ। टेष्ट राष्ट्र र एशोसिएट राष्ट्रले पनि धेरै फरक पर्ने पूर्वकप्तान खड्का बताउँछन्, भन्छन् ‘सन्दीप एशोसिएट राष्ट्रका खेलाडी हुन्। स्टाटसले पनि अर्थ राख्छ। सन्दीपको आइडियल खेलाडी नै हो अमित मिश्रा। पहिले निकै कुरा अमितसँग पनि सन्दीपले सिक्नेछन्। त्यसैले सन्दीपको लागि टिममा पर्न निकै गाह्रो छ।’
त्यसो त सन्दीपको यो सिजनसँगै दिल्लीसँगको तीन वर्षे सम्झौता सकिँदै छ। त्यसैले आफू आइपिएलमा रहिरहन यो सिजन राम्रो खेल्नै पर्ने उनी स्वयमले बताएका थिए। अन्य टिम र खेलाडीलाई सन्दीपले आफ्नो खेल कौशल देखाउनै पर्छ। तर सन्दीपलाई प्लेइङ इलाभेनमै पर्न मुस्किल परिरहेको छ।
हैदराबादविरुद्ध पनि सन्दीप बेन्चमै हुने विश्लेषण प्रशिक्षक समेत रहेका खड्काको छ। भन्छन्, ‘सन्दीपलाई म्यासेज गरिरहेको छु। हैदराबादविरुद्ध पनि पर्ने उनको सम्भावना निकै कम देख्छु। आगामी दिनमा आइपिएल खेल्न यो सिजन उनले राम्रो गर्नै पर्छ। यदि खेल्न पाएनन् भने हाम्रो लागि दुर्भाग्य नै हो।’
सन् २०१८ मा भएको अक्सनबाट त्यो बेलाको दिल्ली डियरडेभिल्सले सन्दीपलाई २० लाख भारुमा अनुबन्धित गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज लिगमा यो सन्दीपको सुरुवाती यात्रा थियो। त्यसपछि उनी विश्वका प्राय सबै लिग खेले। दाम पनि कमाए। सबै क्रिकेट विश्लेषक र टिमको नजरमा सन्दीप पर्दै गए। खेल निखारिँदै गयो।
डेब्यू आइपिएलमा सन्दीपले ३ खेलबाट ५ विकेट लिन भ्याए। तर अन्तिम समयमा दिल्ली आइपिएलबाट बाहिरिसकेपछि महत्वहीन बनेको खेलमा मात्र उनले खेल्न पाएका थिए। २०१९ को संस्करणमा भने सन्दीपले ६ खेल खेल्न पाए। तर यो संस्करणमा पनि टिमले सन्दीपलाई खासै विश्वास गरेन। दिल्लीको महत्वपूर्ण खेलमा सन्दीपले बेन्चमै बिताए।
त्यसबेला ६ खेलबाट ८ विकेट लिए पनि सन्दीप प्लेअफको इलिमिनेटर र क्वालिफायर टु को खेलमा प्लेइङ सेट बाहिरै रहेका थिए। विगतका दुई संस्करणमा सन्दीपलाई टिमले पूर्णविश्वास गर्न सकेको थिएन भने दिल्लीको कम महत्वका खेलमा मात्रै सन्दीपले मौका पाएका थिए। अहिले सुरुवाती दुई खेलमा बेन्चमै दर्शक बनेका सन्दीपको यो सिजन पनि त्यस्तै हुने त होइन?
आर्मीको तेस्रो जित, प्रदेश १ को तेस्रो हार प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर १ लाई त्रिभुवन आर्मी क्लबले ४ विकेटले हराएको छ। प्रदेश... बुधबार, माघ ७, २०७७
पुलिसले १७ ओभरमै खेल जित्यो, सुनिल र कुशलको अर्धशतक यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशसँग ७ विकेटले हारेको पुलिसले आफ्नो दोस्रो खेलमा भने सुदूरपश्चिमलाई सहजै पराजित गरेको हो। १११ रन... बुधबार, माघ ७, २०७७
धनगढी क्रिकेट एकेडेमीलाई सरगरमाथा सिमेन्टको साथ धनगढी क्रिकेट एकेडेमीलाई सगरमाथा सिमेन्टले प्रायोजन गरेको छ। बुधबार धनगढी क्रिकेट एकेडेमी र सगरमाथा सिमेन्टबीच प्रायोजनका लागि सम्झौ... बुधबार, माघ ७, २०७७